မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ သတင်း - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း
ဤအသင်ပိုကောင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ စျေးကွက်နားလည်ပြီးတိုးချဲ့ကူညီရန်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ အတွက် updated အချက်အလက်များအကြောင်းလေ့လာသင်ယူနိုင်သည့်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ သတင်းများ, ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ များအတွက်စျေးကွက်ဖြစ်ပေါ်နေသောနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြောင့်, ဒါကြောင့်အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ website စုဆောင်းအကြံပြုနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ပုံမှန်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။သင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါလျှင်
အချို့သောလက်တွေ့ကျ DIY လက်ကိရိယာများ!
ဤစာတမ်းသည်အဓိကအားဖြင့်လက်တွေ့ကျသော DIY လက်ခေတ်သစ်သားကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
သစ်သားပရိဘောဂကိုထွင်းထုထားသည့်သစ်သားပရိဘောဂများနှင့် ပတ်သက်. သင်မည်မျှသိသနည်း။
အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့ DIY လက်ကိရိယာ
လက်ဖြင့်ထွင်းထားသောအနေဖြင့်အဆုံးပရိဘောဂများ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ဖြင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်လက်မှုပစ္စည်းများတွင်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်သဘာဝကွပ်မျက်ခြင်းများ, ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာခြင်းနှင့်0ိညာဉ်ရေးရာပုံစံများရှိသည်။ အဆင့်မြင့်လက်ထွင်းထုခြင်းသည်အလွန်အမင်းထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်ရလဒ်နိမ့်ကျမှုနည်းပါးသည် ဆက်ဖတ်ရန်
Power Tools အမျိုးအစားများကဘာတွေလဲ။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကိရိယာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ HandHeld နှင့်အိတ်ဆောင်။ လက်ကိုင်ပါဝါကိရိယာများသည်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အဆင်ပြေပြီးကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ မျိုးကွဲများစွာသည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများဖြစ်လာသည်။ စံပြစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများကိုအမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ စွမ်းအင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအရသိရသည် ဆက်ဖတ်ရန်